कुन जिल्लाबाट कति एमालेमा गए, कति माओबादीमा गए ? - Baikalpikkhabar
कुन जिल्लाबाट कति एमालेमा गए, कति माओबादीमा गए ?
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा खारेज भएर पूर्ववत पार्टीमा फर्किँदा संगठनमा भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको छ ।
आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा नेताहरुले गरेको रिपोर्टिङअनुसार लुम्बिनी र प्रदेश २ मा बढी क्षति भएको देखिएको छ ।
बैठकमा नेताहरुले नेता बलियो हुने, तर संस्थागत संरचना लथालिंग हुने हालको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै विचार र नीतिमा स्पष्ट हुँदै माओवादीको के हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन् ।
‘हिजो जनयुद्ध थियो, आज छैन । त्यसो भए माओवादी के हो भन्नुपर्छ’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी एकता गरेर नेकपा भएपछि हामीले समाजवादतर्फ जाने भन्यौं । कस्तो समाजवाद ? कसरी समाजवादमा पुग्ने ? प्रष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो नेतृत्व यस्तो हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ ।’
२१५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीका माओवादीका १०७ जना थिए । उनीहरुमध्ये १७ जना एमालेमा गएका छन् । यद्यपि ४/५ जना अलमलकै अवस्थामा रहेको साहले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीन जना कुन्दन कुशवाह, रामचन्द्र मण्डल र मोहम्मद समिर एमालेमा गएका थिए । रामचन्द्र मण्डल माओवादी केन्द्रमा फर्किन तयार छन् भने समिर अलमलमा छन् । अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिलिप साह एमाले नगएको तर माओवादी केन्द्रमा सक्रिय नभएको साहको रिपोर्टिङ थियो ।
रौतहटका दुई र धनुषाका एक मेयर एमालेमा गएको रिपोर्टिङ साहले बैठकमा गरेका छन् । ‘कार्यकर्ता तहमा धेरै यताउता भएको छैन’ साहले भने, ‘यद्यपि नेकपा विभाजनले आमरुपमा निराशा छ, केहीलाई पहिल्यै एकता ठीक लागेको थिएन, उनीहरु खुसी छन् ।’
माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठित गर्न सहज नभएको उनले बताए । यद्यपि पार्टी नेतृत्व र नीति ठीक हो भने माओवादीले आफ्नो जनमतलाई कायमै राख्नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रदेशसभा सदस्य झपड बोहोरा पनि उतै लागेका छन् । जिल्ला अध्यक्षमध्ये कञ्चनपुरमा अध्यक्षमा भने अलमल देखिएको उनले बताए । अन्यत्र धेरै समस्या नभएको उनले बताएका थिए ।
उपत्यका विशेष कमिटीका इन्चार्ज लीलामणि पोखरेल, प्रदेश समन्वय कमिटीका प्रल्हाद बुढाथोकी र प्रवास कमिटीका अध्यक्ष युवराज चौलागाईले रिपोर्टिङ गरेका छन् ।
सोमबार, ०२ चैत, २०७७, बिहानको ०९:३६ बजे